isiZulu | Abahlali baseMjondolo
Category Archives: isiZulu
Isolezwe: Sibheka umsunguli waBahlali basemjondolo
This entry was posted in isiZulu, Isolezwe on September 21, 2016 by Abahlali.
Abapheli amandla aBahlali, Isolezwe 9 October 2013
This entry was posted in Bandile Mdlalose, Flickr photo, isiZulu, Isolezwe, Zulu on October 10, 2013 by abahlali.
Isolezwe: Bakhala ngentuthuko egqozayo abaseSiyanda
Bakhala ngentuthuko egqozayo abaseSiyanda
USIHLALO wophiko lweZindlu emkhandlwini weTheku, uMnuz Nigel Gumede, uthi abantu abaningi sebegcwala imigwaqo bakhale ngokugqoza kwentuthuko ngoba sekusondele isikhathi sokhetho kunokuthi balandele imigudu efanele.
UGumede ukusho lokhu emuva kokuthi amalungu enhlangano yaBahlali baseMjondolo eSiyanda begcwale umgwaqo izolo bamashela emahhovisi kaMasipala weTheku akwaMashu bekhala ngokugqoza kwentuthuko.
Uthe babe nomhlangano eSiyanda emasontweni amathathu edlule lapho abantu bazwakalisa ukungathokozi ngendlela okusebenza ngayo uhlelo lokunikezelwa kwezindlu, ukungabibikho kukagesi namanzi.
“Sabachazela ukuthi uhlelo lusebenza kanjani emuva kwalokho azikho izikhalo engaphinde ngazithola kodwa siyanxusa ukuthi uma abantu benezikhalo ngezindlu nentuthuko bafike ehhovisi lami bazilethe ukuze sibheke ukuthi singabasiza kanjani,” kusho uGumede.
Usihlalo wekomidi laBahlali baseMjondolo lase Siyanda, uNkk Nomusa Nxumalo, uthe sekungokwesine bemasha behambisa uhlu lwezikhalo kusukela ngo-2006.
“Njengoba kwakhiwa umgwaqo onguthelawayeka lapha eSiyanda kwakuthiwa sizosuswa kodwa ngenxa yokuthi umgwaqo uncishisiwe sayekwa, manje inkinga ukuthi asitshelwa ukuthi sizoshoniswaphi,” kusho uNkk Nxumalo.
Uthe njengoba umgwaqo uzobiywa angeke bakwazi ukuthola izinto zokugibela uma beya emsebenzini.
“Sesisele sodwa esiqhingini esiseceleni komgwaqo. Izingane zethu zizoba nenkinga yokufinyelela esikoleni ngoba singaphesheya komgwaqo njengoba kubiyiwe,” kuchaza uNkk Nxumalo.
Uthe le ndawo abasele kuyo ayinawo amanzi njengoba anqanyulwa sekulungiselelwa ukwakhiwa komgwaqo kanti nogesi awukho.
“Sifuna ukutshelwa ukuthi sizokwenziwa njani thina njengoba sesisele kanje kungasashiwo ukuthi sizokwakhelwa kuphi izindlu. Asikwazi ukuhlala eceleni komgwaqo obiyiwe ngoba nezinto zokuhamba azisangeni lapho sihlala khona,” kusho uNkk Nxumalo.
Okhulumela amaphoyisa kule ndawo, uCaptain Phindile Nxumalo, uthe lo mphakathi ushise amathayi nomatilasi emgwaqeni uMalandela nakweminye emincane engenela eSiyanda kwadingeka ukuthi izimoto zisebenzise eminye imigwaqo.
“Akekho oboshiwe nolimele kanti amaphoyisa akwazile ukususa amathayi emgwaqeni, umgwaqo waphinde wavuleka,” kusho uCapt Nxumalo.
This entry was posted in BAWINILE NGCOBO, isiZulu, protest, Road Blockades, siyanda on April 15, 2009 by Abahlali_3.
Isolezwe: ‘Sicela uMbeki asiphindisele emakhaya’
‘Sicela uMbeki asiphindisele emakhaya’
May 23, 2008 Edition 1
Laba bantu, iningi labo abadabuka eMozambique bebesho ngazwi linye ukuthi sebefuna ukuphindiselwa emazweni azo ukuze baphephise izimpilo zabo.
Izolo amakhulu ngamakhulu alaba bantu abahlala eMayville naseCato Manor, eThekwini, bebembondelene esiteshini samaphoyisa eCato Manor bephethe ingxenye yezimpahla zabo abangakwazi ukuzilayisha uma kuvela ithuba lokuthi baphindiselwe emazweni abo.
Bazisholo bona ukuthi kayisengangabo, sebezimisele ngokubuyela emakhaya.
Izolo uMnyango wezaseKhaya ukhiphe isitatimende lapho uthe ngeke uze uphoqe ukuthi abokufika babuyiselwe emazweni abo uma bengafuni, kodwa kuzomele kube yibo abazisholoyo ukuthi bafuna ukubuyela emakhaya.
Ngesikhathi Isolezwe lihambele esiteshini samaphoyisa eCato Manor izolo, lapho bekugcwele khona izinkumbi zabokuhamba, ubukhangwa inqwaba zabantu nezijumbana zemithwalo ebeziyinqwatshana phambi kwabo. Izingane ezincane bezibangisana ngokudla.
Iningi labesifazane abebekulesi siteshi kabasebenzi kodwa bahlala namasoka noma abayeni babo nawo okumanje ayahlaselwa.
Omunye walaba bantu, uMnuz Anthony Mashaba (40), ongowokudabuka eMozambique, uthe impela uyacela ukuthi uMengameli alusukumele masinyane lolu daba lokubaphindisela emuva bangaze babulawe njengoba kwenzeka.
Uthe nemindeni yabo sebeyibikelile ngokwenzekayo nanokuthi sebelahlekelwe cishe yikho konke abebenakho nabesebekusebenzele iminyaka eminingi.
ULianora Lerugu (17) onengane eneminyaka emibili naye odabuka eMozambique, uthe ayikho into aseyifisa ngaphandle kokuba aphindele ekhaya.
Le ntokazi ithe yasuka kwelakubo yeqa umngcele nesoka layo abebehlala ndawonye nalo kanye nengane yabo njengoba kuze kufikwa kulesi sigaba sokuhlaselwa.
Uthe akasafisi ukuphinde alubhade eNingizimu Afrika njengoba ebaleke nezimpahla zakhe azidayisa emgwaqeni zasala kanjalo.
Okhulumela amaphoyisa, uDirector Phindile Radebe, uqinisekisile ukuthi izinkumbi zabantu bokufika kuleli zithutheleke esiteshini samaphoyisa ngoba zithi zesabela ukuphepha kwazo.
Uthe laba baseCato Manor nabaseChatsworth abazange bahlaselwe kodwa bavele bakhetha ukushiya imizi yabo bayoqhinqa eziteshini zamaphoyisa eziseduze.
Okhulumela uMnyango wezaseKhaya, uMnuz Mantshele Tau, uthe njengamanje uMnyango ulungisa amaphepha abantu abafuna ukuphindiselwa emazweni abo ukuze baphathe izincwadi ezifanele uma sebeqa umngcele.
Eqhuba uthe laba bantu basizwa yizinhlangano ezizimele ezinjengo-United Nations ngokubalayisha zibase emazweni abo.
This entry was posted in Gcwalisile Khanyile, isiZulu on May 23, 2008 by Abahlali_3.